အကောင်းဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာ: စာလုံးပေါင်း & မှတ်ဉာဏ် - တစ်ဦးကနေရာလေးကိုဝယ်လမ်းညွှန်
ခေတ်သစ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာ, ကြီးစွာသောအလေးပေးပညာရေးနှင့်၎င်း၏အရေးပါပုံကိုပေါ် ထား. , ဘယ်သူမှစဉ်းစားတွေးခေါ်၏ဤလမ်းမေးခွန်းထုတ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးများ၏လျော်သောပညာရေးသို့အများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်ကြောင်းအဖြစ်အစောပိုင်းတတ်နိုင်သမျှစတင်ရန်ကောင်းတစ်စိတ်ကူးကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။
ဒါဟာကလေးတွေဆော့ကစားသိရအလွန်အရေးပါသည် - ကရိုးရိုး, ဖြစ်ခြင်းသင်ယူခြင်းနှင့်ကမ္ဘာနှင့်အတူအပြန်အလှန်သူတို့ရဲ့လမ်းဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လည်းလက်တွေ့ကျသောအသိပညာလေ့လာဆည်းပူးဘို့ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ပျော်စရာသင်ယူစေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာ, ပျြောကျယ်ပြန့်မရရှိနိုင်ပါပြီးအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကလေးတွေများအတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်လာမထားဘူး။ စာလုံးပေါင်းဒီတော့ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကအက္ခရာများကိုသင်ယူနှင့်လမ်းတစ်လျှောက်သူတို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်စေရန်ခွင့်ပြုအနည်းငယ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ထုတ်ကုန်မှာကြည့်ယူလိမ့်မယ်, လူတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့အသက်တာ၌လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းအခြေခံကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ကလေးများ p ချစ်ချထား - ငါတို့သည်ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့င့်နှင့်အမျှကလေးငယ်များကစားရန်ချစ်ကြလော့ ကြောင်းဖွစျပွီးထက်ပိုပြီးအသက်တာကိုသူတို့၏နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ပတ်ပတ်လည်နဲ့ထိထိမိမိအမှုအရာရွှေ့သူတို့ကကလေးအဖြစ်ကသူတို့ကိုလှည့်ပတ်ကမ္ဘာကြီးကိုလေ့လာဘယ်လိုဖြစ်တယ်, သူတို့ကလေးငယ်အသက်ရောက်ရှိဖို့အဖြစ်, သူတို့ကကျနော်တို့ကစားစရာမခေါ်အချို့သော tools များနှင့်အတူကစားစတင်ပါ။ ဒါဟာသူတို့အဘို့အလွန်သဘာဝကအရာဖြစ်ပြီးသူတို့အားအရှင်သူတို့ရဲ့ကစားစရာမှတဆင့်တစ်ခုခုသင်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းပေးခြင်းထိပ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
အိုင်ကျူဖှံ့ဖွိုးတိုးတ - ထို sandbox 'အတွက်န်းကျင် Messing ပျော်စရာ၏ဝန်ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်တစ်ခုပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာသုံးပြီးအလေးအနက်ထားကလေး၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အကြိုးရှိနိုငျပါသညျ။ ပညာရေးဆိုင်ရာအထူးသဖြင့်စာလုံးပေါင်းကစားစရာသူတို့ရဲ့မော်တာကျွမ်းကျင်မှုစိန်ခေါ်နှင့်၎င်းတို့၏လွတ်ကျက်စွမ်းရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်, စာတတ်မြောက်ရေးကလေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေး။ နောက်ဆုံးတွင်တိုးလာအိုင်ကျူအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့်, ကစားနာရီမှတဆင့်အမျိုးသား, သူတို့သုံးတဲ့ကစားစရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်တဲ့ဂိမ်းမှာပိုပြီးလိမ္မာဖြစ်လာ, သူတို့၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရ။
လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုး - ပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာအချို့သတင်းအချက်အလက်သစ်များသင်ယူခြင်းနှင့် ပတ်သက်. မသာဖြစ်ကြပေမယ့်သူတို့မှာလည်းကလေးတစ်ဦးရဲ့လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအကြိုးရှိနိုငျပါသညျ။ ကစားစရာဤအမျိုးမျိုးအတော်များများကတစ်ဦးထက်ပိုကစားသမားများအတွက်လုပ်နေကြတယ်, မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူကစားခြင်းဆိရှိခြင်းဒါပေါ်ခွဲဝေမှု, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု, အလှည့်ယူပြီး, ခန့်ကသူတို့ကိုသင်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဤရွေ့ကားရေတွင်းတစ်တွင်း-rounded အရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်လာနိုင်ရန်အတွက်လေ့ကျင့်ရန်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောကျွမ်းကျင်မှုရှိပါသည်။
ပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာလေးတွေ '' စိတ်ဝင်စားမှုကိုဖမ်းယူ - ကလေးများကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များအတွက်လေ့လာသင်ယူ - အချို့သောပိုပြီးအမြင်အာရုံနှိုးဆွပေးနေကြသည်နှင့်အခြားသူများ kinetically ဒါကြောင့်တဦးတည်းနည်းလမ်းအားလုံးလျှောက်ထားမထားဘူး။ သင့်ကလေး၏အကျိုးစီးပွားဖမ်းယူဘယ်အရာကိုထွက်ရှာဖွေခြင်းသူတို့ကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရှာတွေ့ရိုးရှင်းစွာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်တို့က, အလှည့်၌, သူတို့ကိုပိုပြီး / လေ့လာမှု play ချင်အောင်နိုငျသောသူတို့အဘို့အညာဘက်ကိုပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာကိုရှေးခယျြကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါကလေးငယ်စျေးကွက်ကြီးမားတဲ့တဦးတည်းဖြစ်ပြီး, မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးခံရပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာတစ်ခုအဆုံးမဲ့ပမာဏ, ဒါကြောင့်ပဲတဦးတည်းမဖြစ်နိုင်ထင်ရွေးချယ်ရာတွင်၏တာဝန်လည်းမရှိ။ ဒီအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးဖို့, ငါတို့သည်သင်တို့ကြောင်းကိုသင်၏ရွေးချယ်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးနိုင်ပါသည်သိသင့်သောသူအချို့အရာစာရင်းတစ်ခုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
အသက်အရွယ်ထောက်ခံချက် - ဒါဟာအားလုံးမဟုတ်ပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာအားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးလေးတွေများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အလွန်အရေးပါသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ဥပမာအချို့သောထုတ်ကုန်အလွန်ငယ်ရွယ်လေးတွေများအတွက်မွန်းကျပ်အန္တရာယ်တင်ပြနိုင်သည့်အသေးစားအစိတ်အပိုင်းရှိစေခြင်းငှါ, ကွာခြားပေလိမ့်မည်။ အသက်အရွယ်ထောက်ခံချက်အများအားဖြင့်ဒါတစ်ဦးကစားစရာဝယ်ခင်ကဒီပထမဦးဆုံးစစျဆေးဖို့သေချာအောင်အထုပ်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါကစားစရာအသုံးပြုတဲ့ဘာသာစကား Check - box ကိုအပေါ်အကြံပြုအသက်အရွယ်လည်းမရှိသော်လည်းစာလုံးပေါင်းဂိမ်းအတွက်အသုံးပြုဘာသာစကား၏ရှုပ်ထွေးမှုအတွက်စစ်ဆေးပါ။ တခါတလေကစကားလုံးများကိုသူငယ်ကိုနောက်ဆုံးမှာဂိမ်းအဖြစ်အကျိုးရှိသောမဟုတ်စေသည်ရာကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အဘို့အလွန်းရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြောင်းတွေ့ကြုံတတ်၏။
ကလေး၏အကျိုးစီးပွားစဉျးစားကွညျ့ - ဤစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့အနညျးငယျတစျဦးသညျသူတို့အတှကျတစ်ကစားစရာရွေးချယ်တဲ့အခါ၏ဝါသနာဖြစ်တယ်, ဒါသူတို့ကကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့လတံ့သောအခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးမြှင့်တံ့သောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဘာသာရပ်များအကြောင်းကိုစဉ်းစားပါ။ သင့်ရဲ့ဆိတ်သငယ်ဂီတ likes လျှင်ဥပမာ, သူတို့ကိုထိုကဲ့သို့သောအက္ခရာအဖြစ်အချို့သောကိစ္စနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အသံကသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်သီချင်းတွေကိုရှိပါတယ်တဲ့ကစားစရာရပါတယ်။
သင်ကလေးကလေ့ကျင့်ဖို့ဘာလိုချင်ပါသလဲ - ကကလေးငယ်များထံမှလိုအပ်ပါတယ်ပါဝင်ပတ်သက်မှုနဲ့ action ကိုဘယ်လိုကြည့်ဖို့ဂရုတစိုက်ကစားစရာပါစစ်ဆေးပါ။ အခြို့သောစာလုံးပေါင်းကစားစရာတစ်ခုခုရေးဖို့လေးတွေလိုအပ်ဒါကြောင့်ဒီသင်တန်း၏, သူတို့၏အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုနှင့်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားသူများကိုအခမဲ့ကစားစတိုင်ပိုမိုပူဇော်စဉ်တချို့ကကစားစရာ, သူတို့ရဲ့သင့်လျော်သောနေရာများအတွက်တ္ထုကိုနေရာချပေးဖို့ကလေးတွေမေးကြည့်ပါ။
အချို့ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုဖတ်ပါ - ပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာစေကုမ္ပဏီများကသူတို့ကြော်ငြာအမြဲကအရမ်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်ရိုးသားမဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒါကြောင့်ကလေးတွေအသစ်သောအရာတို့ကိုလေ့လာသင်ယူ, ဒါပေမယ့်လည်းအမြတ်ရစေကူညီပေးနေ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူဒါလုပ်ပါ။ ထုတ်ကုန် '' အစစ်အမှန်စွမ်းရည်နှင့်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးဖို့, ကအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်တစ်မိဘအုပ်ထိန်းမဂ္ဂဇင်းအတွက်ဖြစ်စေ, အချို့ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုဖတ်ရှုဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆပါလိမ့်မယ်။ မိဘများသည်မိမိတို့၏ကလေး၏သုခချမ်းသာထက်အခြားအဘယ်သူမျှမအစီအစဉ်ရှိသည်, ဒါကြောင့်သင်ကအချိန်အများစုကိုသူတို့၏အရေးအသားများစိတ်ရင်းဖြစ်ကြောင်းသေချာစေနိုင်ပါတယ်။
အာမခံချက် - ထုတ်လုပ်သူကလေးတစ်ဦးကသူတို့ကိုသုံးပါလိမ့်မည်ဟုစိတ်တွင်ရှိခြင်းဟာကစားစရာတည်ဆောက်ခဲ့သော်လည်း, ထုတ်ကုန်များပင်အပြင်းထန်ဆုံးကိုချိုးဖျက်နိုင်ပါ။ စျေးနှုန်းလည်းမြင့်မားတဲ့မဖြစ်လျှင်, သင်ဤအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ပေမယ် pricier gadgets တစ်ဦးအာမခံနှင့်အတူလာသင့်ကြောင်းသိရန်မလိုအပ်ပါ။ ဒါကြောင့်ပဲသင့်ရဲ့ဆိတ်သငယ်ကိုသင်ဝယ်ယူသောနေ့၌ပြတင်းပေါက်ထဲကကစားစရာပစ်ကြောင်းဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်, သင်ကအစားထိုးရနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံး5စာလုံးပေါင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာ - ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ
ဤသည်ကစားစရာထွက်ရှိသော, ရှိပြီးသားအက္ခရာများ၏အချို့သောအခြေခံအသိပညာရှိသင့်တဲ့သူကိုတက်3အသက်ထံမှမူကြိုကျောင်းသားများများအတွက်အကြံပြုသည်။
ဒီဂိမ်းထဲမှာစကားလုံးများကိုသင်ဒီမှာသုံးခြင်းမရှိအလွန်အမင်းရှုပ်ထွေးဘာသာစကားရှိကွောငျးခနြိုငျဒါ 3, ရှည်လျားအက္ခရာများ4မှဖြစ်ကြသည်။
ဤတွင်ကစားစရာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီဘက်မှာစာတစ်စောင်နှင့်အတူရှစ် Cube, စကားနှင့်ရုပ်ပုံများနှင့် 30 ကတ်များနှင့်အတူ 60 ကတ်များရှိပါတယ်။ အဆိုပါကလေးသည် Cube သုံးပြီး, ထို့နောက်တစ်ဗန်း၏ထိပ်ပေါ်မှာတစ်ကဒ်နေရာနှင့်ကရုပ်ပုံပေါ်ရှုမြင်သောစကားလုံးသို့မဟုတ်အရာကရှင်းလင်းပြောပြ။
ဤသည်ကစားစရာအမြိုးသားတို့အက္ခရာကျွမ်းကျင်ကူညီရန်နှင့်ကစားစိတ်ဝင်စားဖို့လမ်းမှတဆင့်၎င်းတို့၏စာလုံးပေါင်းကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအပြင်သူတို့ရဲ့လက်မျက်စိညှိနှိုင်းနေတဲ့ကလေးငယ်ရဲ့ memory အပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်သောစမ်းသပ်ပြီးနှင့်စိန်ခေါ်အဖြစ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မဟာဗျူဟာစဉ်းစားတွေးခေါ်ပါလိမ့်မည်။
ဆိတ်မိဘများသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူကပျော်မွေ့နိုင်အောင်ဒီကစားစရာတစ်ခုထက် ပို. လူတစ်ယောက်အဘို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ဖြစ်ခြင်း။ ကုမ္ပဏီအတွက်ကစားခြင်းအားဖြင့်, တဦးတည်းကသူတို့ရဲ့လူမှုရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရန်နိုင်ပါတယ်။
2. သစ်သားပညာရေးဆိုင်ရာ Toy ကိုကြည့်ပါ & စာလုံးပေါင်း
ကြည့်ရှုပါ & စာလုံးပေါင်းအမျိုးသမီး Melissa & Doug ကုမ္ပဏီအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးအနေနဲ့ပညာရေးကစားစရာဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ရောင်စုံနဲ့အမြင်အာရုံဂိမ်းများကိုပျော်မွေ့တဲ့သူကလေးမြားအတှကျစုံလင်သည်။
အဖြစ်ဝေးဂိမ်းကိုယ်တိုင်ကသက်ဆိုင်ရာပါသည်အတိုင်း, ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်:anice သစ်သားသေတ္တာထဲမှာ, သင်သည်အသီးအသီးအခြမ်းအပေါ်စာလုံးတွေအဘို့အရာတစ်ခုခုနှင့် cutout နေရာများ၏ရုပ်ပုံရှိသည်ရှစ်သစ်သားပျဉ်ပြားကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ထို့နောက်သုံးလေးယောက်စာတစ်စောင်စကားလုံးများကိုစာလုံးပေါင်းရန်ပျဉ်ပြားပေါ်တွင်အရပ်တို့ကိုသို့ fit နိုင်ရောင်စုံစာလုံးရှိပါတယ်။ အဆိုပါကလေးများတစ်ဦးပဟေဠိဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်ပုံထဲမှာပြထားတဲ့စကားလုံးစာလုံးပေါင်းဖို့အက္ခရာများကိုအသုံးပြုပါ။
အက္ခရာစဉ်ကျင့်သုံးအပြင်အမြိုးသားအ images နဲ့စာရေးသားဘာသာစကားအကြားကသူတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။ သောကြောင့်စာလုံးများအတွက် cutout နေရာများ၏, ထိုအရပ်၌အမှားတွေကိုမအခန်းတစ်ခန်းဖြစ်ပါသည်, ဤသူတို့ကိုသင့်လျော်သောစာလုံးပေါင်းသင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ကြည့်ရှု & စာလုံးပေါင်းနှင့် ပတ်သက်. A ကောင်းဆုံးအရာကအလွန်ကြီးစွာသောလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်နိုင်သည်ဟုအဓိပ်ပာယျကိုပိုပြီးထောက်ကလေးအရွယ်တုန်းကနေဖြင့်ကစားနိုင်သည်။
စာလုံးပေါင်းသာ 16 စကားလုံးများကို
3. ရေခဲသေတ္တာ Phonics သံလိုက်ပေးစာသတ်မှတ်မည်
သင့်ရဲ့ရေခဲသေတ္တာတံခါးကိုအပေါ် - ခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များစွာကိုပျြောသင်ယူမှုဖြစ်နိုင်ခြေကမ်းလှမ်းကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပညာရေးကစားစရာပါ!
ထုတ်လုပ်သူရဲ့အသက်အရွယ်ထောက်ခံချက် 2-5 နှစ်ပေါင်းသော်လည်းဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့နှစ်ခုနှစ်အရွယ်အဘို့ဤကစားစရာဆိုတော့ရှေ့တော်၌ထိုအက္ခရာများ၏အရွယ်အစားစဉ်းစားပါ။ အဆိုပါအရာဝတ္ထုမျှမျှတတသေးငယ်ပြီးအလွန်ငယ်ရွယ်သားသမီးတို့အဘို့တစ်မွန်းကျပ်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါကစားစရာရေခဲသေတ္တာရဲ့အပြင်ပန်းအပေါ်ထားရှိခြင်းနှင့်စာလုံးပေါင်းဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုအဆုံးမဲ့အရေအတွက်ကိုများတွင်အသုံးပြုနိုင် 26 စာတစ်စောင်သံလိုက်ပါဝင်ပါသည်။ အခုတော့ဒီထုတ်ကုန်များ၏စစ်မှန်သောအားသာချက်ပြီးတော့အသံအက်ခရာ၏အသံဖော်ပြနှင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုဥပမာပေးခြင်းကစားသောစာလုံးများကိုနေရာချနိုင်သည့်ထဲသို့ဘတ်စ်ကား-ပုံအီလက်ထရောနစ်ကိရိယာဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကလေးတွေတစ်ခုလုံးကိုအက္ခရာ၏အသံထွက်ဝိသေသလက္ခဏာများသင်ယူဖို့အဘို့ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သူငယ်သူတို့ကိုတစ်လျှောက်မနာသီချင်းဆိုနိုင်အောင်ဘတ်စ်ကားကစားစရာလည်း "ဘတ်စ်ကားပေါ်ဘီး" ကို "ဗျည်းအက္ခရာသီချင်း" အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ပါဝင်သည်။
အဆိုပါကုမ္ပဏီချို့ယွင်းချက်အပေါ်တစ်ဦး3လအာမခံပေးထားပါတယ်နှင့်မဆိုသတိပြုမိလျှင်သင့်ရဲ့ကစားစရာအစားထိုးနိုင်ပါသည်။
4. ခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင်ရေးခြစ်ခြင်းနှင့် Write
ဒါကြောင့်အသက်အရွယ်မှကြွလာသည့်အခါ, ဒီကစားစရာ3နှစ်နှင့်အဟောင်း၏လေးတွေဘို့အကြံပြုသည်။ သူတို့သည်နောက်အသေးစိတျအပိုငျးဖြစ်တဲ့အတွက်မရှိသတွေကအသက်ရှူအန္တရာယ်ဖြစ်ပြီး, တစ်ခုတည်းသောဖြစ်နိုင်သမျှဘေးကင်းလုံခြုံမှုအန္တရာယ်ဟာ pointy ကလောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဤတွင်ကစားစရာလည်ပတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။ အက္ခရာနဲ့နံပါတ် (1-10) ခလုတ်ပါဝင်သောအီလက်ထရွန်းနစ်ဘုတ်အဖွဲ့အဖြစ်ဤစက်ကိရိယာမှပူးတွဲပါသောအထူးကလောင်နှင့်အတူရေးသားခြင်းများအတွက်အာကာသရှိပါသည်။ အဆိုပါကလေးသည်မိမိတို့၏ရွေးချယ်မှုတစ်ခု button ကိုနှိပ်နိုင်ပါတယ်, သူတို့အရေးအသားဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်အသံနဲ့ flash မီးလုံးများကညွှန်ကြားချက်ရေးသားခြင်းရပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါကလေးငယ်ရိုးရှင်းစွာကလောင်နှင့်အတူအလင်းအိမ်၏လမ်းကြောင်းကိုအောက်ပါအတိုင်းနှင့်စာတစ်စောင်သို့မဟုတ်မှန်ကန်စွာအရေအတွက်ကရှင်းလင်းပြောပြ။ ပြီးနောက်, ဆိတျစာဖျက်ပစ်နှင့်ကျော်စတင်နိုင်ပါသည်။
ဒါဟာသုံးစွဲဖို့အလွန်ရိုးရှင်းသောဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်ကလေးတွေဟာကလောင်ကိုင်ပြီး၏ခံစားမှုရအရေးအသား၏မော်တာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလေ့ကျင့်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုတည်းသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုညွှန်ကြားချက်စာဖြစ်စဉ်ကို oversimplify လိမ့်မယ်ရှိမရှိဖြစ်ပါသည်, ထို့ကြောင့်ကလေးကသူ့ကို / သူ့ကိုယ်သူအားဖြင့်ပုံစံမျိုးစုံမှတ်မိဖို့မရှိပါ။
အဲဒီမှာဒီကစားစရာအပေါ်တစ်ဦး3လန့်အသတ်အာမခံဖြစ်ပြီး, သငျသညျကုမ်ပဏီ၏ website တွင်ပြုလုပ်အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဒါဟာအရေးအသားဖြစ်စဉ်ကို oversimplify စေခြင်းငှါ,
5. ထိကိုင်ပြီးတော့လေ့လာပါလုပ်ဆောင်ချက် Desk
VTech ရဲ့ Activity ကိုစားပွဲပေါ်မှာကျိန်းသေပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများယနေ့စာရင်းထဲတွင်ပါဆုံးစွယ်စုံပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတိုင်းကလေး၏ preference ကိုများအတွက်တစ်ခုခုရှိသည်ဖို့အာမခံမျိုးစုံသင်ယူမှုနည်းစနစ်များနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါစားပွဲခုံအက္ခရာများနှင့်နံပါတ်များနှင့်မည်သို့မှန်မှန်ကန်ကန်သူတို့ကိုရေးသားဖို့ပြသသောအလင်းဖွင့်ခင်းကျင်းပြသထားပါတယ်။ ဒါဟာအစဂဏန်းလေ့ကျင့်မှုအတွက် 20 ကွဲပြားခြားနားသောဂီတကျော်နှင့်အတူဂီတကစားသမားတစ်ဦးကစားစရာဖုန်းကိုရှိပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောဘာသာရပ်များကိုဖုံးတစ်ဦးချင်းစီ၏အီလက်ထရောနစ်လှုပ်ရှားမှုစာမကျြနှာကိုနေရာချရန်အသုံးပြုသည်စားပွဲခုံထိပ်မျက်နှာပြင် - စသည်တို့ကိုသင်္ချာ, သိပ္ပံ, ဂီတ, အဲဒီမှာကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတူသွားသောငါးစာမျက်နှာများ, ဒါပေမယ့်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်ပိုမိုသီးခြားစီမဝယ်နိုင်ပါ။ ကလေးသူငယ်အခလာတာနဲ့အမျှအသစ်တိုးချဲ့အထုပ်ပိုပြီးစိန်ခေါ်မှုပစ္စည်းများနှင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများဆံ့ကြောင်းဝယ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျထိပ်မျက်နှာပြင်ကိုချီအဖြစ်, သင်အောက်စာမျက်နှာများများအတွက်သိုလှောင်မှုအာကာသရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် desktop ပေါ်မှာ၏အောက်ခြေအစိတ်အပိုင်းကိုတစ်ဦးမြေဖြူတွေသုံးပြီးဘုတ်အဖွဲ့သို့မဟုတ်အနုပညာဘူတာရုံအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဤသည်ကစားစရာအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများ၏တိုးတက်သောသင်ယူမှုအဘို့ကြီးသောဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်, ကလေးတွေ '' အက္ခရာနှင့်စာလုံးပေါင်းကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေသူတို့ကိုဟန်ဆောင်ကစားပါစေ, နှင့်ကမ္ဘာ၏များစွာသောရှုထောင့်နှင့် ပတ်သက်. ကသူတို့ကိုသင်ပေးလို့ရပါတယ်။
VTech ဝယ်ယူသည့်နေ့မှစတင်ကာတစ်ဦး3လအာမခံပေးထားပါတယ်။
expandable နှင့်သင်ကြားမှု၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ updated နိုင်ပါသည်
တစ်ခုသာ3လအာမခံရှိပါတယ်
နိဂုံး & ကျွန်ုပ်တို့၏ထောက်ခံချက်
ဒါကြောင့်စာလုံးပေါင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်များအတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်လူကြိုက်အများဆုံးပညာရေးဆိုင်ရာကစားစရာအချို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စာရင်း၏အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ကြောင်းကောက်ချက်ချခဲ့ကြ VTech လုပ်ဆောင်ချက် Desk။ အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်စေရန်လွယ်ကူခဲ့တယ်, ဤကစားစရာအဘယ်သူမျှမကအခြားထုတ်ကုန်များကြောင့်ကိုက်ညီနိုင်အောင်စွယ်စုံများနှင့်ပြောင်းလဲနေသောဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက် Desk ကမ်းလှမ်းမှုကလေး၏အသက်အရွယ်ကန့်သတ်မထားပါနှင့်လေးတွေဟာစဉ်ဆက်မပြတ်စိန်ခေါ်မှုရနိုင်အောင်တိုးချဲ့နိုင်အဆိုပါသင်ယူမှုဖြစ်နိုင်ခြေ။ ဒါဟာမသာစာလုံးပေါင်းသင်ပေးပေမယ့်ကလေးတစ်ဦးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းနှင့်အသုံးဝင်သောနေသော၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုစာမျက်နှာများတွင်ဘာသာရပ်များ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံပါဝင်သည်ပါဘူး။
1 ။ ကိုက်ညီပေးစာဂိမ်း
2 ။ သစ်သားပညာရေးဆိုင်ရာ Toy ကိုကြည့်ပါ & စာလုံးပေါင်း
3 ။ ရေခဲသေတ္တာ Phonics သံလိုက်ပေးစာသတ်မှတ်မည်
4 ။ ခုန်ပျံကျော်လွှားနိုင်ရေးခြစ်ခြင်းနှင့် Write
5 ။ ထိကိုင်ပြီးတော့လေ့လာပါလုပ်ဆောင်ချက် Desk
ပန်းခြံ - ကစားကွင်း